Ku saabsan degel cusub iyo waxyaabo kale oo Xubuntu ah | Laga soo bilaabo Linux
Ku saabsan degel cusub iyo waxyaabo kale oo Xubuntu ah
Alexander (aka KZKG ^ Gaara) | | Muuqaal / Shakhsiyeyn, Qaybinta, GNU / Linux
Muddo ayey qaadatay markii aan booqday xubuntu.org Waxaa laga yaabaa taasi waa sababta aan kaliya ula yaabay naqshadeynta cusub ee goobta, dabcan waa la waxyooday Ubuntu.com.
Runtii aad ayaan ugu faraxsanahay isbedelka, maadaama naqshaddii hore ay umuuqatay kaftan, fudud, laakiin caajis ah. Dareenka ka tagitaan ee ay aniga ii soo gudbisay ayaa aad iyo aad u sii kordhay, ilaa la gaadhay qaybinta sida oo kale, taas ilaa nuqulkii 11.10 si qurux badan ayaa loo dayacay jeclahay. Laakiin arrimihu way isbadaleen, oo hadda websaydhku wuxuu igu dhiirrigeliyaa si dhab ah, dhiirrigelin ah, waxaanna ra'yi aad u wanaagsan ka maqlay qaybinta.
Kuwa aniga i garanaya ayaa la yaabi kara waxa aan ku dhex wareegayay qaybahaas, dabcan waxaa jira sharaxaad aad u fudud taas. Waxaan si dhab ah uga fikirayaa isticmaalka Xubuntu 12.04. Waana sharxayaa sababta.
Kahor intaanan guda gelin sababaha igu kallifaya inaan qaato go'aankan, waa inaan caddeeyo wax aan u arko inay muhiim yihiin: Wax aan diidanahay ma jiraan Ubuntu sida qaybinta. Ayadoon la kala dooranaynin Uncle Mark iyo iskudhafkiisa ayaa samayn kara, waxaan qabaa Ubuntu Waa mid ka mid ah qeybinta ugu dhameystiran ee u jirta adeegsadaha GNU / Linux. Wax dan ah kama lihi tas-hiilaadka adeegsadaha, taasi maahan waxa igu kalifaya inaan u boodo Xubuntu, laakiin tirada tirada badan ee baakadaha ku jirta keydadkooda, oo ay ka mid yihiin PPA.
Waan jeclahay Debian. Waxay ahayd, jirtay oo ahaan doontaa, qaybinta aan ugu jeclahay, laakiin waxaa jira waxyaabo mararka qaar igu wareeriya. Waxaan ahay isticmaale jecel inaan si joogto ah wax u tijaabiyo. Shalay waxaan raadinayay waddo aan dhigo GlobalMenu en Xfce, Waxaan isku dayey inaan siiyo desktop-kayga muuqaal iyo dareen la mid ah OSX, mana aanan gaarin hadafkeygii. Bilawga, inta badan xirmooyinka aan ku guuleystey inaan rakibo waxay ka yimaadeen Ubuntu, oo markaan is idhi wax waliba way hagaagayaan, dalabku uma shaqayn sidii la filayay, marka lagu daro waxay u baahnayd ku-tiirsanaan in Qiyaas kaliya jiro? Hagaag haa, gudaha Ubuntu.
Aad ayey iiga careysiisaa Ubuntu wax badan ka soocan Debian on noocan oo kale ah, laakiin haye, taasi maahan ujeedku hadda. In kasta oo aan jeclahay inaan wax walba u qaabeeyo sida aan doonayo iyo waxa aan ahayn, haddana waxaan qabaa inaan haysto "Qaangaadhay" si aan u hadlo, oo waxaa jira waqtiyo waxa kaliya ee aan doonayo ay tahay "Rakib oo Isticmaal". Markaa taasi waa sababta ugu weyn ee go'aankeyga: Ka faaideysashada saldhig Debian, tirada ugu badan ee baakadaha ay i siiso Ubuntu. Waan cadeeyay, kaliya waan ka fakarayaa, macnaheedu maahan inaan horay u sii socon doono.
In kastoo hadaan ka fikiro, waxaan ku sameyn karaa rakibida iso of Ubuntu-Server sidii ay ahayd a netinstall en Debian oo aan astaysto waxaan rabo. Taasi waa ikhtiyaar aanan meesha ka saareynin, waxaana laga yaabaa inaan ka helo qaabeyn saafi ah Xfce. Waxa kaliya ee shakiga iga gelinaya, waa taas Ubuntu Ujeeddada aad u leedahay inaad u soo dhoweyso distoorkaaga dhammaadka isticmaalaha, ka saar shaqooyinka aad hadhow u baahan tahay, tusaale ahaan tan waa nidaamka diiwaangelinta, laakiin maahan wax aan xal u helin
Waa hagaag, waxba, sii deynta nooca 12.04 ayaa soo socota waana arki doonaa, haddii aan halis ugu jiro inaan ka tago gacaliyahayga Debian.
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Muuqaal / Shakhsiyeyn » Ku saabsan degel cusub iyo waxyaabo kale oo Xubuntu ah
Fikradayda, u adeegsiga Ubuntu aasaaska Xfce waa wax iska hor imanaya maxaa yeelay waxay durba u baahan tahay ilo ka badan qayb kasta oo kale. Debian + Xfce aad ayuu uga fududyahay. Hadda, haddii aadan haysan dhibaatooyin CPU / RAM ah oo aad jeceshahay Xfce, sidaad u sheegtay Ubuntu + Xfce ayaa ah ikhtiyaarka ugu fiican ee lagu tijaabiyo xirmooyinka. Aniga shaqsi ahaan waan dooran lahaa wixii kale oo fudud oo fudud oo aan ku dhejiyo 'Xfce', runtii.
Haa, waxaan isku dayay Xubuntu qaababkii hore waana ogahay in Debian uu ka fudud yahay Xfce, laakiin waa inuu noqdaa isla wixii aan ku sheegay ianpock's
Waad salaaman tahay 🙂
Faahfaahinta ayaa ah in qof kastaa uusan aqoon u lahayn inuu rakibo nidaamka aasaasiga ah, ka dibna si tartiib tartiib ah u rakibo deegaanka, dadka isticmaala ugu badan ee ku dhiirranaya kuma dhiiran doonaan inay la kulmaan tan ... waana halka Ubuntu ay la timaaddo xalalkeeda "diyaar" ah sanduuqa) 🙂
ma isku dayday tan?
Hagaag, waxaa horeyba u jiray PPA (Shakhsiyaadka Xirmooyinka Shakhsiyadeed) oo aad kala soo bixi karto oo aad ku rakibi karto xirmada si aad ugu hesho liiska adduunka ee XFCE (ugu yaraan Ubuntu).
Kaliya ku dar PPA oo rakibo xfce4-appmenu-plugin tilmaame-appmenu appmenu-gtk xirmooyinka appmenu-qt. Tusaale:
sudo apt-add-kaydinta ppa: the-warl0ck-1989 / xfce-appmenu-plugin
sudo apt-get update && sudo apt-get rakib xfce4-appmenu-plugin tilmaame-appmenu appmenu-gtk appmenu-qt
Ka dibna waxaan ku darnaa App Menu galka XFCE.
Ku jawaab fure
ok, kadib markaan arkay ubuntu,
Kama tagi doono debian kaliya taas, sikastaba waxaan ubadali lahaa desktop,
Maahan Globalmenu ama AppMenu waxkastoo aad rabto inaad ugu yeerto, waxay ku saabsan tahay qadarka xirmooyinka la heli karo ee Debian waa inaan sameeyaa sixir si aan u rakibo.
Isku soo uruurinta iyo xallinta ku tiirsanaanta gacanta 😉
Laakiin miyuu ku shaqeeyaa Xubuntu 13.10 (haddii ay cadahay) qaabab ka baxsan 11.04 (Waxaan u maleynayaa in aan xasuusto in 12.10 uusan socon) haddii ay sidaas tahay waxaan isku dayi lahaa Voyager Linux cusub oo u muuqda cabsi) ama xitaa istuudiyaha ubuntu ee sameeya Waxa kaliya ee maqnaa ayaa ahaa tan, waxayna keeneysaa Xfce halkii laga heli lahaa Midnimada, waxaan isku dayi doonaa anshax wanaag waana arki doonaa
PS Waxaa jira nolol ka baxsan midnimada
Laakiin tani waa mid kaliya oo waa lagama maarmaan in la sugo inta ay u soo baxeyso noocyo casri ah, si kastaba ha noqotee waxaan isku dayi doonaa ficil-celin leh UbuntuStudio 14.04 si aan u arko haddii ay shaqeyso
Go go xD Ha walwalin, kuma xukumayo inaad rabto inaad isku daydo Xubuntu. Kahor adeegsiga Debian Xfce waxaan adeegsaday Xubuntu 11.10, waana inaan kuu sheegaa, MA ahan wax xun (inkasta oo aysan u fududayn sida Debian, waan kuu xaqiijinayaa). Iyo si kadis ah waxaan sidoo kale isku dayay inaan rakibo Xfce Global Menu oo ku yaal Debian mana aanan awoodin, in kasta oo aan rakibay dhammaan ku tiirsanaanta umuuqday inay lama huraanka yihiin.
Mana aha inaad si joogto ah uga tagto Debian, waad sii wadan kartaa isticmaalkeeda, laga yaabee inaad la socoto desktop kale oo tijaabo ah.
PS: Ama aan aad isugu mid nahay ama aad aqriso maskaxda ...
Hagaag, intay waxtar leedahay, markay soo baxdo haddaan rakibayo xubuntu 12.04
Dabcan, furitaankeyga 'SUS' ma uusan saarin.
Nacalaa nacalaa, waan necbahay xD
Hagaag, waxaan la socday kii ugu dambeeyay muddo bil ah ilaa iyo iminkana igama guul darreysan, waxaan u isticmaalaa kaliya kuwa ugu badan.
Ala ayaa la ogaaday in la la'yahay markii aan lahaa archlinux iyo debian, in haddii ay jilicsan yihiin ...
Ku jawaab ianpock's
Bil aanad waxba qabanayn, 6 bilood gudahood ayay soo noqotaa ...
Waad salaaman tahay, waxaan kaliya ka fekerayay inaan isku dayo inaan ku rakibo xubuntu (ama iftiin kale oo distro ah) kombuyuutar duug ah, p-III, 501MHZ iyo 320 RAM oo leh win-xp oo aan haba yaraatee xumaan lahayn, laakiin waxaan u maleynayaa inay noqon doonto Maro badan oo kombiyuutarkaas ah, waxay hooyaday u adeegsan lahayd inay ku shaashadaan shabakadda, muusigga iyo meesha ugu dambaysa ee aan ku xirto markii aan furayo kombuyutarkayga.
Ku jawaab davidlg
Anigu ma qorsheynayo inaan rakibo Xubuntu, laakiin Xfce Ubuntu oo aan isku mid aheyn ... 😀
Waxaan rakibay xubuntu 10.04 waxaanan damaanad qaadi karaa inay la mid tahay ama ka culus tahay ubuntu 10.04. Hadaad ii sheegto inaan rakibo saafi ah ka sameeyo Ubuntu server, waa hagaag mana fahmin.
Waa inaad sameysaa isla shaqadii sidii debian inst loogu talagalay serverka ubuntu, ee codsiyada ????????
waxaan ku raaceynaa khibrada aad leedahay iyo shaqada wanaagsan ma fiicnaan laheyd in la rakibo archlinux halkaasna waxaa hubaal ah in codsiyada aur, waxaad heli laheyd wax intaa ka badan oo kugu filan ...
Waa in la aqoonsadaa in meesha loo yaqaan 'the disrosical distros' ay jirto hal boos oo keliya, ugu yaraan horumariyeyaashu waa inay ka fikiraan taas, sababtoo ah shaqooyin badan oo farshaxan ah iyo kuwa kale, laakiin kuwa kale maahan kuwo rasmi ah ama waxay leeyihiin magacyo dhexe ...
Xaqiiqdii waa inaad aragto waxa ku cunaya Xubuntu. Haddii qof ii cadeeyo in Debian Kernel uu ka fiicanyahay Ubuntu taasna sababtaas darteed ayuu u cunaa wax ka yar, ka dib waan iska xidhay. Ma fahmin sida codsiyada isku mid ah ay ugu badnaan karaan hal disto marka loo eego kuwa kale. Waxaan marwalba u maleynayay in isticmaalka sare ee Ubuntu ay sabab u tahay xaddiga jinniyo ordaya si nolosha ugu sahlanaato adeegsadaha, oo rakibidda (ku dhowaad) laga yaabo inaysan sidaas ahayn.
Waxaan dhawaan ku aqriyay blog ingiriis isbarbar dhiga debian xfce4 iyo ubuntu server xfce4.
Qoraagu wuxuu umuuqday mid aad iyo aad u fanboy ah Debianita laakiin sababo layaableh awgood wuu layaabay xitaa wuxuu sheegay inuu waxbadan ka cunay.
Waxa kale oo uu jeclaa in cusbooneysiintu socotey 5 sano, arrin sidoo kale ah in la tixgeliyo haddii aad rabto inaad qayb ku yeelato waxyaabahaaga yaryar oo aanad ka walwalin.
Waqtigan xaadirka ah waan ku qanacsanahay waana arki doonaa sida ay isu bedesho, habka aan u aqriyay elav ee bartaada kale, waqti dheer ka hor waxaad heysataa cashar loogu talagalay rakibida debian-ka ee la hagaajiyay, waan jeclaa, hadana markaan xasuusto waan kugu hambalyeynayaa!
Mahadsanid ^^ Way fiicnaan laheyd inaad heshid isku xirnaanta balooggaas si aad u aqriso 😀
Hadda markaan fiirinayo kala duwanaanshaha kheyraadka u dhexeeya debian xfce iyo xubuntu, waxaan arkaa xubinta inay u baahan tahay 3 GB disk adag, taas oo ah in la yiraahdo seddex jeer waxa ay tahay.
Anigu ma fahmin sababta runta ah labadaba, waxaan u arkaa wax lala yaabo
Waxaa laga yaabaa inay leedahay 300 kun oo codsiyo dheeri ah iyo runtii codsiyo badan oo badan markii la bilaabayo ...
Ku jawaab Asuarto
Mencanta jawaabtaada iyo inbadan oo kaaga imanaya Windows !!! 🙂
haha shaqada guriga XD, laakiin dhab ahaan @elav wuxuu adeegsadaa qaanso
Nope, isticmaal Debian. Arch ima sii hayn wax ka badan hal toddobaad labadii jeer ee aan rakibay. ^^
Muddo ayuu u adeegsaday ... gaaban, kooban, laakiin halkaas ayay ahayd hehe
Tusaale bixi oo waxaad isticmaashaa shitka aad isticmaasho (lagu arko astaamaha) Mierdows Aereo ama waxkastoo jira
Hagaag, haa elav, way fiicnaan laheyd in la aqriyo, maxaa dhacaya markaan ku aqriyo goobta shaqada mana jirto wado waali ah oo lagu helo bogga, maadaama aan ku sameeyay Firefox anigoon magacaaga sheegin, waxaan qiyaasayaa inay jiri laheyd qaab loo arko laakiin ma aanan ogeyn.
Taariikh kama tagayso, in kastoo aan isku dayi doono inaan kuu helo wax la mid ah 🙂
Tani ma ahaan laheyn, sax?
Maya maya, waxay ahayd maqaal aad loo soo shaqeeyay, kaalay, way iga xanaaqdaa markaan arko iyada oo luntay
Bil ka dib waxaad ka tagi doontaa Ubuntu haddii aad sameyso, waxaad arki doontaa xD, wax badan oo rakibid fudud laakiin sidoo kale si fudud u jabiso.
Ma ahan wixii aan raadinayay laakiin ………
Waan aqriyay si aan u arko sida
Faallooyinka ugufiican ee aan ku aqriyey boostada oo dhan
Hagaag, halkan waxaa ah isticmaale xubuntu ka socda nooca 9.04 oo raadinaya waxyaabo kale ...
Waxaan u isticmaalaa xubuntu 11.10 oo waxaan ahay illaa ********. Tusaale ahaan, waxay ku rakibaan bluetooth daemon oo haddii aad isku daydo inaad ka saarto, waxay kuu sheegeysaa inay sidoo kale ka tirtiri doonto xubuntu-desktop.
Haddii aad isku daydo inaad ka saarto bluezman, waxay kuu sheegeysaa inay sidoo kale ka saari doonto claws-mail ...
Haddii aad isku daydo inaad ka tirtirto libgnome-bluetooth8, waxay kuu sheegaysaa inay ka baabiinayso maareeyaha shabakadda ...
Dhinaca kale, "ogeysiinta" xfce waxay u shaqeysaa sida ay rabto mana ka jawaab celiso xulasho kasta oo qaabeynta ah maxaa yeelay masiix ayaa lagu rakibay tilmaame kale oo si dhuumaaleysi ah ku soo galaya Xubuntu, haa ama haa.
Waxay si xun ugu takri-falaan maktabadaha gnome illaa heer ay u eg tahay Ubuntu oo qaadaysa muuqaalka Gnome oo dusha ka raraysa Xfce, runtiina waa mid ka mid ah sababaha uu Xubuntu u yahay "mid culus" oo aad u qaata RAM.
Xfconfd iyo gconfd-2 ayaa isla mar ordaya, waxaan la yaabanahay in kumbuyuutarku uusan boodin labadii jeerba.
Iyo kooxda horumarinta Xfce ee ka shaqeynaya baabi'inta dhammaan ku tiirsanaanta Gnome ...
Ugu dambeyntiina uguyaraan, illaa laba sano kahor Jannis Pohlman (mid kamid ah kuwa ugu firfircoon hormarinta Xfce) ayaa ciyaaray doorka iskuxirka udhaxeeya horumarinta Xfce iyo kooxda Xubuntu. Ka dib "kulan" ka dhacay magaalada Barcelona, ​​Jannis wuxuu ku daabacay liiska horumariyeyaasha inuu isla markiiba iska casilay jimicsiga shaqadan mana uusan bixin wax sharaxaad ah oo ku saabsan sababta (midkoodna cidna ma weydiin). Ilaa intaan ogahay cid kale oo markhaatiga qaadatay ama u fidisay inay ilaaliso nooc kasta oo xiriir ah oo ay la leedahay horumarinta Xubuntu.
Marka haddii aad rabto inaad tijaabiso Xubuntu horay u sii soco ... laakiin waad ogtahay aragtidayda
PS: Waxaan isha ku hayaa Linux Mint Debian Edition Xfce, sidee u shaqeysaa?
Foojarka. Taasi waa sida saxda ah ee ku dhacda Xubuntu, oo rakibaysa xirmo maaddo ah oo ay ka buuxdo ku tiirsanaanta Gnome, taas oo ii horseedaysa inaan u maleeyo inay tahay sababta ugu weyn ee isticmaalkeeda sare. Taasi waa sababta aan u doonayo inaan u tijaabiyo oo aan ugu rakibo Ubuntu-Server maadaama ay aniga ila tahay in Ubuntu uusan lahayn wax netinstall ah. Sikastaba, markaan sameeyo waan kuu sheegi doonaa, in kastoo aan ku celiyo, waxaan ka fikiray oo keliya ..
Dhab ahaan, waxaan isticmaalay Xubuntu (iyo Ubuntu) in cabbaar ah waxayna igu dhacday si isku mid ah markii aan rabay inaan baabi'iyo jinniyo iyo xirmooyin aanan u baahnayn (xiise sidoo kale Bluetooth) Tan ugu xunna waa in markii ugu dambayntii, kadib markii aan mashquulsanaa maalmo, aan ku guuleystey inaan ka tago Sidii aan doonayay, waxay kudhamaatay jebinta wax walba, iyo hadii dhowr dib dib ucelintii aan aakhirkii ku guuleystey inaan ku hagaajiyo sida aan jeclahay, bilaha 6 ee masiirka ah ayaa imaan lahaa, iyo maadaama aan jeclahay inaan wax walba cusbooneysiiyo, waa inaan mar kale rakibo (cusbooneysiiyo ama hadlo) iyo dib u noqoshada isla qoob ka ciyaarka Waxay ahayd in la ooyo. Ugudambeyn waxaan go aansaday inaanan mar labaad isticmaalin meerto.
Oo iska ilaali, PPAsku way fiican yihiin, laakiin maahan wax layaableh, si lama filaan ah (iyo in ka badan intii ay ahayd) xitaa shilalka ugu caansan ee cusbooneysiinta
Waxa kale oo jira bedel kale oo loo diro jinniga bluetooth si uu ula wareego cu **. Waxaad rakibtay RCConf waadna dhamaysay 😀
Adoo adeegsanaya Fedora 16 oo ay la socoto Xfce, waxaan sameynayay sida ugu fiican. laakiin waxaan horeyba uga fikiray dib ugu noqoshada gacaliyahayga Debian aniga iyo Xfce si aan u arko sida.
Marka la cusbooneysiiyo Fedora ayaa ka wanaagsan Debian mise waan qaldanahay?
Kaliya maaha debian, qaybinta kasta.
Maalin dhaweyd waxaan ku rakibey fedora pendrive (cajiib ah maxaa yeelay waa distoorkii ugu horeeyey ee aan ku rakibi karo pendrive) mana ahan wax aan waxba ka jirin laakiin wey bilaabaneysaa, shilal badan ayey dhacdaa marar badan barnaamijyaduna waqti dheer ayey qaadanayaan in la furo, malaha waa loogu talagalay rakibida pendrive ama kaarka intel laakiin ...
Sababtoo ah rakibida pendrive ...
Waxaan fahansanahay in fedora ay marwalba ku sarayso wax walba ... xitaa ka hor debian.
Hadda waxa ay tiraahdo «» waa runtaa ma ahan in la rakibo masarro oo dib habeyn loogu sameeyo si ay bahalnimo u noqoto, waa "rakib oo Isticmaal" marka Ubuntu iyo Linux mint ayaa ku guuleysanaya dagaalka, gaar ahaan Linux Mint mid ayaa rakibaya waana intaas! in la isticmaalo wax kasta oo ay tahay maxaa yeelay wax waliba waa diyaar! taasi maahan wax xun, taas bedelkeed, dhammaan waxyaabaha loo yaqaan 'distros' waa inay sidaas oo kale noqdaan.
Marka maxaa kale oo loo yaqaan 'distros'?
Aabe, wax fikrad ah malahan .. laakiin waxa aan ogahay ayaa ah in fikradda ah in la adeegsado nidaam la adeegsado, ee aan gacanta lagu dhigin ilaa laga adeegsado. Ma ahan qadarinteyda shaqsiyeed.
Sidaad u leedahay "fikraddu waa"
Si fudud, waxaad leedahay daaqado iyo haddii aad rabto ubuntu / reexaanta.
Haddii fikraddu tahay in la barto sida ay u shaqeyso, waxaa jira archlinux, gentoo iyo kuwa kale.
barashadu way fiican tahay ... laakiin qof kastaa ma doonayo inuu waqtigiisa ku qaato inuu arko sida ay u shaqeyso inta ay shaqeyneyso. Waxaan u maleynayaa in bini'aadamka intiisa badani ay sidan u fikiraan ...
Waa arrin dhadhan ... laakiin i rumee sida ay u adag tahay in la aqbalo, wakiilka wuxuu rabaa in wax walba la sameeyo, waxaan jecelnahay inaan baakadaha helno oo aan adeegsanno, kuwa kale waxay jecel yihiin inay ku jiraan wax kasta oo cusub iwm.
Waxa ugu fiican ayaa ah in qof walba uu boos u helo had iyo jeerna ay jiri doonto dhago la jaan qaada waxa aad raadineyso. 🙂
Waxaan hayaa mini HP, waxaanan arkaa in ka badan sanad iyo badh aan ku rakibayo Ubuntu Pendrive. Iyo in runta la sheego, waxba weligood ma jabin. Waa inaan sheegaa in 11.04 ay ahayd mid aan xasilooneyn arintaas, 11.10 waa nooc aad u qurux badan. Mararka qaarkood waxaan u maleynayaa in kuwa aqoonta u leh u-socodka habeynta iyo qaabeynta wax walba, ugu dambeyn iyagoo aan fahmin sida waxyaabaha qaarkood u shaqeeyaan, waxay ku dambeeyaan inay wax walba qariyaan.
Marar badan ayaan arkay in dhibaatadu aysan ahayn distoorka, waa adeegsadaha aan aqoon sida loo garto waxa baahidoodu tahay. Kuwo badan ayaa si fudud uga baxa casharrada si ay u bartaan iyagoon garanayn sida wax loo sameeyo naftooda.
Waa run. Waan isticmaalay Ubuntu muddo sannad ka badan waana inaan idhaahdaa, wax sidan oo kale uma burburin. Deganaansho la’aanta Ubuntu, waxay la mid noqon kartaa qaybinta kale ee hubaal leh hardware, in kastoo isticmaalaha, had iyo jeer uu leeyahay% qaladkiisa waxaas oo dhan.
SI QOF AH ... elav <° Linux sifiican uma sharixi karin.
Taasi waa sababta aan u ixtiraamo sababaha mid kasta, ma jiraan wax xun oo loo yaqaan 'distro' oo xun, waxaa loo sameeyay inay keenaan baahi gaar ah, haddii ay jebiso waa sababta oo ah isticmaalaha gacanta badan saaray.
Markii aan bilaabay Linux, waxaan isticmaalay Ubuntu 11.04 iyo inaan gacanta ku helay xitaa hooska .. iyo anigoo raba inaan waxbadan barto! Dhawr jeer ayaan waxyeello u geystey, laakiin waan baranayey .. Marka nidaamku waxyeelleeyo, isticmaalaha sidoo kale wuxuu leeyahay khalad cayiman. In la yiraahdo debian sid waa talo xumo waa qalad, maxaa yeelay haddii adeegsaduhu kaliya rakibo waxa lagama maarmaanka ah oo uusan gacan badan helin, nidaamku ma jabi doono. taasi fudud. (Waxaan tusaale u soo qaatay dacwadda loo yaqaan 'debian sid case')
elav <° Linux waad i sixi kartaa markasta oo aan khaldanahay 🙂
Tani waa sababta aan u necbahay ubunto, maxaa yeelay had iyo jeer waxay ku wareegaan u qalmid.
Halkan waxaan ku haysannaa tusaale wanaagsan
Taasi miyay ku jirtaa elav <° Linux mise aniga ayaa ila jira?
Waxaan u maleynayaa taas TDE, laakiin dhag jalaq uma siin ilmaha.
Maanta anigu uma ihi booska marka waan jeclaan lahaa haddii aadan taaban kubbadayda
Taasi waa sababta aanad aniga iila jaanqaadin, waxaad tahay uun nacas nacas ah.
Hubso inaad isticmaasho Shit
Horay u soco oo hel OS wanaagsan, tusaalooyinka Fedora / mint / Arch, xitaa Ubuntu, wax walboo waa ka qiimo yar yihiin in Mocosoft ay ku jabto
Waxa ay ka yiraahdaan "fududahay rakibid iyo fududahay in la jabiyo" waxay ila muuqataa inaysan ahayn kiiska .. Waxyaabaha Midnimada way jabaan, laakiin waxay kujiraan qolofta gnome ee Ubuntu MAYA.
Waxaan isticmaalay ubuntu iyo lint mint muddo sanado ah (oo leh dhamaan noocyada miisaska kumbuyuutarka) mar walbana wuxuu kudhamaadaa inuu burburo 3 ama 4 bilood kadib (mararka qaar waxay ahayd inaan qasan sameeyay, kuwa kale maahan). Hadda waxaan la isticmaalayay Fedora oo leh KDE illaa laba bilood hadda waana faraxsanahay. By the way, Fedora inay diyaar u ahaato adeegsiga, uma baahnid inaad wax badan ka qabato Ubuntu si aad ugu diyaargarowdo isticmaalkeeda (kudar qaar repo, rakib koodhadhka, flash iyo barnaamijyada aad jeceshahay inaad adeegsato)
Marka laga hadlayo adeegsadaha Asuarto, haddii pendrive uu gaabis yahay, sida Fedora live cd oo kale wuu gaabis yahay.
qashinka dila dijo
kasio eh nin wadani ah oo koofiyad buluug ah leh, hadaad weydiiso maxaan ugu sheegaa hadii sifiican ay tahay maxaa yeelay waxaan ahay qof adeegsada fedora, waxna kama badna inaan ku dhex wareego debian sid hehe, hada fedora way gaabis tahay hadday badanaa dhacdo.
Xitaa haddii aadan rumaysan, Jamin Samuel fedora waxay leedahay baakadaha cusub ee in ka badan sid iyo tijaabo ah, xitaa waxaan kuu sheegi karaa "ku dhowaad par" oo leh qaanso iyo gentoo.
U jawaab dilaaga qashinka
Ama xitaa intaa ka sii badan, iyada oo la tixgelinayo in Fedora ay tahay jahwareerka halka ugu badan ee wararka ay ka yimaadaan 😀
Hada haa laakiin markaan idhaahdo been baan ahay
Laakiin dhallaanka, markii aan iri waa been in Fedora ay tahay qaybinta oo had iyo jeer ay ku jiraan wararka ugu badan?
Sidaad adigu tiraahdo, waxaan ahay nooca adeegsada ee dhaha Fedora waa tan ugu hal abuurka badan.
Anigu kama helayo faallooyinka sababtoo ah markaa waad waalan tahay
WAO! ... si fiican tani waxay ahayd wixii aan u baahnaa .. si aan ula hadlo dadka isticmaala koofiyadaha buluuga ah blue
Uma aanan qaadin fedora cabsi aan ka qabo baakado aan caadi ahaan ka helo ubuntu, sida:
- Diiwaanka Gnome-Sound-
- Ciyaaryahan Filim ah oo Toten ah
- Soundconverter (Beddelaha codka)
- Browser-ka Chromium
- Firefox Mozilla
- Isku duubka
- Qalabka Gnome-Tweak-Tool
- Nidaamka Gnome-System-Monitor
- Evince (Foomka Dukumintiga (PDF) faylasha)
- Sawir fudud
Haddii aad ii sheegayso in fedora ay jiraan xirmooyin ka cusub kuwa tijaabada debian iyo sid (O__O) walaal, markaa maxaan ku qabannaa adoo ku wareejinaya dhulalka debiya? maxaan u adeegsanayn fedora ??
Xaqiiqdii waxaan baran doonaa sida loo isticmaalo fedora ..
dilaaga qashinka wax ii sheeg, baakadaha aan sheegay ma laga heli karaa fedora? iyo sidee loo rakibi karaa?
nadiifinta tuurista GDebi iyo Synaptic
dilaaga qashinka iyo kasio libreoffice 3.5 ayaa kujira fedora 16 ??
Halkan ka daawo: https://blog.desdelinux.net/buscador-de-paquetes-para-varias-distros/
Wanaagsan! abaayo aad baad u mahadsantahay 😉
Waa hagaag, waxaa jira wax walba oo fedora ah marka laga reebo baakado gaar ah oo loo isticmaalo debian iyo wax soo saarka, si fiican oo maxaan ugu jiraa debian maxaa yeelay waxaa jira wax xoogaa i argagax gelinaya, Fedora oo ah inay ka socoto nooc illaa nooc, ka dibna keydku ma yara oo maxaa yeelay waxaan u baahanahay xoogaa rogrog ah, rakib mar iyo mar dambe dib ha u rakibin oo aad baan u waalanayaa fedora rawhide repos, inkasta oo aan ku laabanayo fedora ha ka welwelin taas, inkasta oo aanan waxaad u maleyneysaa inaan jeclahay inaan ku tijaabiyo diro kale, taasi waa sababta fedora ay u tahay # 1 distro ah debian waxaan horeyba u haystay inay tahay dooqeyga labaad marka fedora ay igu guuldareysato waxyaabo X ah, hadaanan adeegsan qaanso waa sababta oo ah ma i raacdo aniga iyo marka laga reebo inay burburinayso falsafadeeda KISS hehe
dilaa qashinka ma adigaa laanta kujira Sid ama laanta Imtixaanka ?
Waxaad leedahay tijaabinta iyo dhinacaba dib looma soo celin doono mar dambe .. \_ O / Ma xasuusto xD waxaan u maleynayaa in tijaabada ay iigu yeereyso xD ahahaha waxa xun waxa weeye waqti dheer ayey qaadataa ¬¬ waxaana rabaa inaan haysto qolofta gnome 3.4 bishaan ama ugu yaraan usbuuc kadib markii aan baxay .. maya ma aqaano hadii laanta Sid Waxaad ku haysan doontaa keydkaaga dhowr maalmood ka dib markaad tagto 🙁
Gacaliyahayga Jamin Samuel waxaan isticmaalayaa debian sid, maaddaama qolofta gnome 3.4 aysan weli gaarin meel lagu keydiyo, waxaan kaliya idhi waxaan hayaa qaar durba la cusbooneysiiyay oo ku wajahan 3.4, tusaale ahaan duubista faylka oo horay ugu jirtay nooca 3.3.92. XNUMX uguyaraan marka loo eego debian sid, ka dibna horay usoco iskuday tijaabinta debian, hadaad sifeeysana markaas sifiican ujeex oo iskuday markale hehe.
Si aan kuu dilo… Trade Debian for this slop that Ma aqaan nooca cenutrius ee taas sameyn lahaa.
Marka laga reebo dhufeysyada aad gelisay waa doqonimo, miyaad dhab ahaan u baahan tahay dhammaan shucuurta Xwinbuntu ay ku timid heerka? Laakiin haddii qofna u baahnayn.
Ma waxaad ka hadlaysaa fudayd? Isticmaalka Debian? Maaddaama Debian ay tahay wax fudud, ma jiraan wax faraq ah oo u dhexeeya dhibaatada Debian iyo tan Xwinbuntu.
Waxaan ku riyoonayaa adiga lab ...
Cudur daar nacasnimo yaad u tahay adiga, adiga? Hagaag, anigu waxaan ahay qofka ku fikiraya inuu rakibo Xubuntu, maahan ilmahaaga. Uma arko wax qalad ah isticmaalka baakadaha ku jira keydka Ubuntu Ma jiraa qof ii sheegi kara waxa dhibaatadu tahay? Sababtoo ah si kasta oo aan fiiriyo, ma heli karo.
Waxaan horeyba ula joognaa waxyaabo aan micno lahayn ...
Hadaad aqriso ku dhihi maayo inaad isticmaasho baakadaha Winbuntu repos, laakiin Winbuntu waxay keeneysaa waxyaabo badan oo nacasnimo ah oo aan adeegsan ama p ... hooyadeed.
Waa doqonimo in laga cawdo dhibaatada loo haysto Debian (taas oo aan jirin, sida saaxiibada hahahahaha) ama in la yiraahdo Winbuntu waxay leedahay xirmooyin badan.
Wax badan ayey kugu kici doontaa inaad furto terminal oo aad soo gashid amar aad ku rakibto barnaamij yar, ma lagaa helayaa herniated?
Ubuntu waxay keeneysaa farabadan xirmooyinka macmacaanka sida ku xusan qadarinteeda? Adiga Ubuntu waxaa ku jira baakado badan oo aan ku jirin Debian oo aan la shaqeeyo, xaralx inaan ku siiyo tusaale. Laakiin dabcan, ma aqaano sababta aan naftayda ugu daalay aniga oo isku dayaya inaan sharaxo wax aadan rabin inaad fahanto ...
Oh waa maxay dhibaato daran ... Adigaa soo dejinaya tar.gz oo rakib. Midkale oo ubaahnaan doona qalliinka hernia-ka ...
Ama waxaad iweydiisaa sidaad sameysay wax kabadan hal jeer.
Inta badan barnaamijyada Ubuntu waxay u muuqdaan kuwo aan micno lahayn oo aan la isticmaalin, waxaanan ula jeeday kuwa marka hore ku yimaadda, laakiin kaalay, haddaadan si xun wax u akhrin, waad ogaan doontaa
Ma dareemayo inaan wax u sameeyo sidaad adigu wax u qabato. Naxdintaas madaxaaga ku hay. Ma doonayo inaan ururiyo, ma doonayo inaan shaqo ku qaato, waxaan kaliya doonayaa inaan sameeyo:
$ sudo aptitude install xaralx
Iyo in amarku xalliyo ku-tiirsanaanta, oo aan rakibo arjiga. Ha isku dayin inaad noloshayda ku noolaato. Ha u iman inaad ii sheegto sida loo noolaado. Adiguna jidkaaga buuxi ukumo hana ka goosan Gtalk (ama ha u muuqan si aan muuqan) marka wax lagu weydiiyo oo aadan rabin inaad ka jawaabto.
Inta badan barnaamijyada Ubuntu waxay u muuqdaan inay yihiin dibin-daabyo aan la isticmaalin, waxaanan ula jeeday kuwa sida caadiga ah ku yimaadda,
Ma i siin kartaa tusaale? Aniguna waan ku celinayaa, waxaad ka hadlaysaa dhadhankaaga shakhsi ahaaneed, iyo inaad wax walba ku darto, Ubuntu ma isticmaashid markaa maxaad ka ogtahay waxa isticmaalaya iyo in kale Sahamin ku samee xog adag ka dibna soo saar shuruudahaaga ilmaha.
Bullshit aan la isticmaalin waa shuruudahaaga, haddii tusaale ahaan X isticmaalaha uu rabo inuu isticmaalo barnaamijka Y ... nin, maxaad u siineysaa suurtagalnimada inaad ku rakibto oo aad ugu isticmaasho dadaalka ugu yar ee suurtogalka ah. Haa, waa run in la soo dejin karo oo la soo ururin karo ... laakiin inta badan dadka adeegsada noloshu way ka baqayaan taas.
Adoo jidka ku jira, ukunta iska buuxi oo ha ka goynin Gtalk (ama ha iska dhigin wax aan muuqan) marka wax lagu weydiiyo oo aadan rabin inaad ka jawaabto.
Ciyaaraha yar yar, darawalada aan loo baahnayn, barnaamijyada macaan, iwm.
Ha isku dayin inaad noloshayda ku noolaato. Ha u iman inaad ii sheegto sida loo noolaado
Ma xasuusataa wixii ku dhacay birta birta? Waa hagaag taas
Elav waxaas oo dhan, ma akhrisay baloogga?
Waa maxay fikirkaaga ku saabsan ???
By the way, waxaan u arkaa in serverka ubuntu uu la mid yahay debian inst, laakiin waxa xun ayaa ah in uusan isticmaalin laba eray sir ah, mid xidid iyo mid adeegsadaha sida debian u isticmaalo.
Ma aqaano haddii tani muhiim ii tahay adiga, haa, ma jecli isticmaalayaasha leh mudnaanta xididka.
Su'aal kale: Ma dhigeysaa wax ssh, myqsl iyo / ama firewall adeegyo iyo shirkad ah ???
Waxaan u maleynayaa in keydka aad u isticmaali laheyd wax sida bacula ama wax la mid ah.
Akhriska lagula taliyay: hagaha adeegaha ubuntu hadaad dooratid inaad wax cabiro xitaa ...
Mana dhahayo maxaa yeelay khibrad uma lihid, haddii kale xaqiiqda ah inaan marwalba wax uga tagno duulimaadka!
Maya, si daacad ah shalay uma aanan helin waqti. Maanta isha ayaan ku hayaa. Dhibaatada Ubuntu ee sudo aniga ahaan waa wax aad u culus, laakiin wax aan la xallin karin, runti. Hadda ka Server ahaan waxaan u maleynayaa in Ubuntu uusan waxtar lahayn (khibrad u gaar ah). Adeegyadu waxay ku xidhan yihiin hadba wixii aad u baahan tahay ...
Marka geesinimo halkan waxaan ka baqayaa inay labadeenuba isbarbar dhigaan laba shay oo kala duwan, xasiloonidaada iyo aniga codsiyada iyo kuwa kale.
Waa run in Ubuntu uusan xasilooneyn laakiin ma waxaad ii sheegi doontaa in debian-kii ugu dambeeyay uu sidiisa u deggan yahay sida ciqaabta (debian5)
Waxaan khibrad kaaga sheegayaa inay isku darsatay bakhaarro iyo wax walba oo aysan jebin (waxaan ka hadlayaa 5), ​​weligay ma arag disto deggan oo deggan, maadaama ay macquul tahay in xasillooni darradu + dhinac tahay, way deggan tahay oo yaanan la dhihin sid + tijaabo ah.
Kaalay sidee xasiloonayd, waxay ahayd caajis.
In debian 6 taas bedelkeeda taasi igama dhicin aniga ...
Ubuntu taas lama sameyn karo maxaa yeelay haddii aadan dhaqso u helin argagax yar yar ...
Adeegyada, Ubuntu uma adeegsanayo kaftan ahaan ... i aamin, khibrado cabsi leh.
Hagaag, hada wixii aan wali aqrin lahaa ...
inta badan dadka adeegsada noloshu way ka argagaxsan yihiin taas.
Laakiin arintu sidan maahan
Maxaa elav loola jeedaa haysashada baakado badan, ayaa ah in rasmiga rasmiga ah ee 'Ubuntu repo' ay jiraan codsiyo badan oo la heli karo si loo rakibo marka loo eego meelaha loo yaqaan 'Debian repos'.
Maxaad uga jeeddaa???
Aynu nidhaahno Ubuntu Server = Debian ...
Maxaad sidaa u leedahay
Waxaan rabay inaan dhaho waxay la mid tahay isla markaana serverka ubuntu waa waxa ugu dhaw debian inst-ka marka loo eego ubuntu. Hadii aysan run aheyn ii sheeg midkee ah ???
Taasi Ubuntu ma tahay tan ugu xasilloonida jirta, waana taas sababta loo yidhi
eeg waxa aan ka helay webka AJAJAJAJAJAJAJAJAJA Ma joojin karo qosolka xD
ah richard stallman aabihii GNU, waxa kaliya ee aan la wadaago waa xorriyad, ma ahan fasaadin uu adeegsado.
Laga soo bilaabo SAID ilaa xaqiiqda, si fiican ayey u socotaa…. # falsafada #gnu #linux #FSF
Ku jawaab oleksis
Haye, waxaan u maleynayaa in dad gaar ah ay jeclaan lahaayeen inay arkaan tan (? http://www.taringa.net/posts/linux/10189925/Debian-y-Ubuntu-_Mitos-y-Verdades_-_Comparativa-2011_.html
Aniga ahaan markii aan dhammeeyo Gyroscope-ka ka socda Ololaha
Boostada waa kaambal gaar loo leeyahay
Tani waa sida bogga cusub ee Firefox uu u ekaan doono
Nooca la heli karo ee 3.3 ee Linux Kernel ayaa ku milmay Android